WBO’N HIDHAAMTOOTA SIYAASAA 100 HIIKE – AMBO TV
WBO’n Wallaga bahaa Sassigatti lola cimaa geeggessudhaan waraana mootummaa erga mo’atee booda hidhamtoota siyaasa 100 ta’aan hiikee jira. Madoon waraana mootummaa Hospitala wallagaa Yuniversiitiitti dhiyeenya naqaamtee keessaþi argamuutti kan geeffamaan ta’uu odaa tarbii toora tiwiteera isaa irratti maxxansee jira
Gaafa hagayya 31 ganama WBO’n waajira polisii saasiggaatti dhukkaasa bane.
Humna waaranaa mootummaa konkolaataan piikaapii sadii deegarsaaf ukkee ergamee tures gutummaan guutuutti owwataa irratti barbaadeeffameera
Humni gargaarsaaf agar guutee irra dhufan konkolaataa 3f sadi guutummatti bakka afata (mandara 6) jedhamutti barbaadaa’e.
Waaree boodaa humni mootummaa guutummaatti sassigaa keessaa mo’amii akka bahan ta’ee hidhamtootni siyaasaa 100 hiikamaan. Bulchaan. Kantiibaan Genatii Taayee jedhamu akkasumas hoggaanaan dhimma nageenyaa Daasalany Ebiyo waraanaa mootummaa waliin baqatanii bahan.
Galgala naannoo sa’aatii lamaa humni mootummaa uke jiru humnaan konkolaataa uumataa fudhatee madoo isaa fi kanneen du’an gara naqamteetti geessa turan.
Naqamtee irra konkolaatan 3f lamaa fi Ambuulaasiin 3 ergamtee madoo fi kanneen du’an gara naqamteetti geessa turan.
Sa’aatii 4:30 waraanni konkoolaata 3f sadii fi oraaliin 1 WBO irratti dhukkasa banaanis bakka mandara 3 jedhamuutti guutummaan guutuutti barbaada’eera.
Gama biraatiin immoo Injifannoon boonsaan shawaa lixaa Gindibaratitti akkasumas Arsii Gololchaatti argamee jira.
WBO’n injifannoo isaa tikfachaa gara fulduraatti tarkaanfachaa jira.
Previous PostEebbisaa Addunyaa waggoota 25 booda yoo yaadannu
Next PostIda evacuees urged not to return home after devastation
1 thought on “WBO’N HIDHAAMTOOTA SIYAASAA 100 HIIKE”
Pingback: WBO’N HIDHAAMTOOTA SIYAASAA 100 HIIKE – saglan Iluu.org